Momba anay - NINGBO ACE MACHINERY Co., Ltd.
Ny milina ACE dia manambatra tsara ny herinaratra sy ny fahadiovana hitondra anao ny milina tsara indrindra amin'ny beton sy compaction. Amin'ny maha mpanamboatra sinoa lehibe ny fitaovana fanamboarana adidy mavesatra antsika dia afaka manolotra mpanjifa isan-karazany amin'ny fitaovana ilaina ao anatin'izany ny paompin-drano, fanapahana rebar, bender bender, saw-beton, ary mixeur vita amin'ny beton. Azo alaina ihany koa ny fisafidianana kojakoja fitaovana mivaingana. Tena tsara amin'ny fananganana sy fikojakojana fototra, ny vokatray dia matetika ampiasaina amin'ny asa toy ny lalana, trano, plaza, lalamby ary seranam-piaramanidina.
Ny fitaovana ACE dia ankatoavin'ny fenitry ny indostria toy ny CE sy CCC. Nanomboka tamin'ny taona 2009, ny trano famokarana nataonay dia nohamarinina isan-taona avy amin'ireo matihanina avy amin'ny Vondrona TÜV SÜD. Hatramin'ny niorenan'ny tambajotram-fanaparitahana anay tamin'ny taona 2005, dia niantoka ny toeran-tsondrana any amin'ny faritra misy an'i Amerika, Afrika, Eropa Atsinanana, Azia atsimo atsinanana, Afovoany Atsinanana sns.
Ny mari-pahaizana avo lenta
Ny orinasanay dia nampidirina tamin'ny 1995 ho toy ny Zhenxing Construction Machines Factory. Manana birao foibe ao amin'ny Distrikan'i Yinzhou ao amin'ny tanànan'i Ningbo izahay, ny fonon-jaza sinoa ho an'ny fanjaitra vibrator - natomboka tamin'ny famolavolana ity singa ity ny asanay. Efa ho 2 taona niainan'ny traikefa ara-barotra avy any ivelany no namela anay hipoitra ho mpanamboatra malaza eo amin'ny indostria anatiny. Ny fananan'ny orinasanay dia mitatra 8000m2 raha toa ka 23000m2 kosa ny velarantany fitambaran'ireo trano fonenanay. Manakaiky ny Seranan'i Ningbo sy ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Lishe dia manome logistics mety antsika.
Antony nisafidianana Ningbo Ace Machinery Co., Ltd.
Manana renivohitra 1,3 tapitrisa RMB voasoratra anarana izahay ary mpiasa maherin'ny 120 ao anatin'izany ny injenieran'ny vokatra 3, mpanara-maso ny famokarana 3, mpitantana trano fitahirizana 4, mpanolo-tsaina 5 QA, mpiasa miasa 8 ary mpiasa mahay 95. Tamin'ny 2012, nanoratra vola miditra 38 tapitrisa RMB izahay. Ny fotodrafitrasan'ny orinasanay dia mizara ho an'ny sampana mitokana ho an'ny fanamoriana manokana toy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny fanangonana, ny santionany, ny fidiovana, ny kalitao ary ny loharanon'olombelona. Ny fitantanana manokana dia ahafahantsika miaina ny tontolon'ny asa sy manatsara ny fizotran'ny fikorianana ary mifehy tsara ny rafitra fanaraha-maso kalitao.